Myanmar Deitta | Framing the Transition
27th October-14th November 2015 | Tues-Sat | 10am-5pm
Opening reception: Saturday 24th October, 7pm
Twelve Burmese photographers ‘frame’ the transition in Myanmar: addressing some of the burning issues confronting their country during this historic period. Their documentary photography essays giveapowerfully intimate look at subjects as varied as mi-grant workers, rural poverty and inadequate education, land grabbing, environmental degradation, lack of transitional justice, drug abuse, ethnic conflict, and LGBT rights.
They show the necessity of urgent change in Myanmar which has only recently begun to emerge from its dark past.
Framing The Transition is supported by the Human Rights Fund of The Ministry of Foreign Affairs of The Netherlands and the Embassy of The Kingdom of The Netherlands in Thailand.
The project is produced by Corinne van Egeraat of ZIN Productions, with the participation of world-renowned photographer Dana Lixenberg and documentary filmmaker Petr Lom.
Work in progress of this project will be presented in Myanmar in October and November of 2016, at different venues in Yangon.
The international premiere of Framing The Transition and international media output will be in 2016. ZIN Productions - The Netherlands Contact: info@zindoc.nl
ပြောင်းလဲခြင်းပြုတင်းပေါက် မြန်မာ့ သမိုင်းဝင်အပြောင်းအလဲကိုမြန်မာဓါတ်ပုံဆရာ ၁၂ ယောက် ကပုံဖော်ခဲ့ပါပြီ။ သမိုင်းဝင်အပြောင်းအလဲကာလအတွင်း သူတို့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အပူတပြင်း လူ့ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စအချို့ကိုလည်းတင်ပြထားပါတယ်။
ရွှေ့ ပြောင်းလုပ်သားများ၊ ကျေးလက်ဒေသဆင်းရဲမွဲတေမှု နဲ့ ပညာရေး ရေချိန်၊ မြေယာသိမ်းဆည်းမှုများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ယုတ်လျော့လာမှု၊ တရားမျှတသောကူးပြောင်မှုမရှိုခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးပြဿနာ၊ လူမျိုးရေးပဋိပက္ခ၊ လိမ်တူချစ်သူများအခွင်းအရေး အစရှိတဲ့ အကြောင်းအရာများကို ဓါတ်ပုံစွမ်းပကား နဲ့အနီးကပ်ပုံဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီဓါတ်ပုံဇာတ်လမ်းအားလုံးဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေး လှိုင်းလုံးကြီး ရဲ့ရုိုက်ခတ်မှုကို စီမံခန့်ခွဲဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ နောက်ခံအခင်းအကျင်းကို ထင်ဟပ်နေပါတယ်။
သူတို့ ဟာအတိတ်ရဲ့ အမှောင်ထုထဲကနေ ဖောက်ထွက်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြန်ဆန်လွန်း တဲ့အပြောင်းအလဲများအတွက်လိုအပ်တဲ့ ဇွဲလုံ့ လကို ပြသနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ပြောင်းလဲခြင်းပြုတင်းပေါက်ကို နယ်သာလန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ လူ့ အခွင့်အရေးရန်ပုံငွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိ တဲ့နယ်သာလန် သံရုံးတို့ ကပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။
ဇင်ထုတ်လုပ်ရေးမှ Corinne Van Egeraat စီစဉ်ထုတ်လုပ်ပြီး ကမ္ဘာကျော်ဓါတ်ပုံဆရာမ Dana Lixenberg နဲ့ မှတ်တမ်းတင် ရုပ်ရှင်ရုိုက်ကူးသူ Petr Lom တို့ ကလည်းပါဝင်အားဖြည့်ထားကြပါတယ်။
ရုိုက်ကူးနေဆဲ ပြောင်းလဲခြင်းပြုတင်းပေါက်အကြောင်း အသေးစိတ်ကို တော့ အောက်တိုဘာနဲ့ နိုဝင်ဘာတို့ မှာ မြန်မာနိုင်ငံ မှာမိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာမိတ်ဆက်ခြင်း အစီအစဉ်တွေကိုတော့ ၂၀၀၆ ခုနစ်မှာ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ZIN Productions - The Netherlands Contact: info@zindoc.nl
Leahcim Du The Jade Mine | Hpa Kant, Kachin State
A day in the life ofajade mine worker who, like so many of his fellow workers, is addicted to drugs.
ဖားကန့်ကျောက်စိမ်းတွင်းမှ ဆေးသမားဘဝသို့ ရောက်သွားကြသော ကျောက်တူးသမားများ ၏ ဘဝကို ထင်ဟပ်နေသော ကျောက်တူးသမားတစ်ဦး၏ ဘဝ
Pyay Kyaw Myint The Muslim Free Hospital | Yangon, Yangon Region
A Muslim charity hospital provides free care to all in downtown Yangon.
အခမဲ့ကုသပေးသော ရန်ကုန်မြို့ လည်က မွတ်ဆလင်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံ။
Thiha Lwin Street Kids Hanging Out | Pyay, Bago Region
A homeless boy lives by collecting garbage. When the monsoon disaster strikes this year, he distributes aid to victims.
Pyay Kyaw Aung Country Girl – Factory Girl | Ayeyarwaddy and Yangon Region
The story of Thawdar San,a23 year old migrant worker employed inaYangon garment factory who returns home each holiday to work on her family farm.
၂၃နှစ်အရွယ်ရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမလေး သော်တာစန်း ဟာ ရန်ကုန်အထည်ချုပ်စက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်ပြီး ရုံးပိတ်ရက်ရှည်များမှာ ရွာပြန်ပြီး မိသားစုလယ်လုပ်ငန်းကိုကူညီရပုံ။
Nai Hong Sar Ramonya The Long Walk To School | Bago Region
Children walk miles toaschool set up by volunteer villagers fed up with government indifference to rural education.
ကျေးလက်တောရွာများရဲ့ ပညာရေး။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထကျောင်း တက်နိုင်ရန်ပင် ကလေးငယ်များမှာ မိုင်ပေါင်းများစွာလမ်းလျှောက်ရပါပုံ။
Thet Htoo Fight For Food | Bago Mountains, Yangon and Bago Region
Villages in the Pegu mountain range are threatened by wild elephants, who forage closer and closer as logging destroys their natural habitat.
ပဲခူးရုိုးမဒေသကကျေးရွာများမှာသစ်ထုတ်လုပ်မှုများကြောင့် သစ်တောပြုန်းတီးမှုတွေဖြစ်လာပြီး ဆင်ရုိုင်းများအတွက် နေစရာလျော့ပါးလာတာကြောင့် ဆင်အန္တရာယ်ရင်ဆိုင်နေရပုံ။
Shin Myint Mo The Secret My Village Women Share | Border Villages, Shan Region
In the border towns of Eastern Shan State, there isalong tradition of sending underaged girls to work in Thailand. When they return, nobody talks about ‘the working years’, but they all know.
ရှမ်းပြည် အရှေ့ပိုင်း နယ်စပ်မြို့လေးများ မှာ အသက်မပြည့်သေးသည့် အမျိုးသမီးငယ်များကို အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလုပ်လုပ်ရန် စေလွတ်သည့် ဓလေ့ တစ်ခုရှိနေသည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာညောင်းလျက် ရှိပါသည်။ ထိုမိန်းကလေးများ ပြန်ရောက်လာလျှင် လည်း အလုပ်အကြောင်းကိုမည်သူမျှ မေးမြန်းပြောဆိုခြင်း မရှိဘဲ စကားလုံးများ မလိုအပ်ဘဲ နားလည်ထားလိုက်ကြသည်။ ထိုအမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး ၏ ဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို တင်ပြထားပုံ။
Thurain Aung My Globalization Generation | Yangon, Yangon Region
Yangon youth culture: new and old.
ရန်ကုန်နဲ့ လူငယ်ယဉ်ကျေးမှု၊ အသစ်နဲ့ အဟောင်း
Bo My Land Is Not My Land | Magway Division
A story about illegal land grabbing.
YuYu Myint Than Unbroken Friendship | Meiktila, Mandalay Region
Double portraits of interfaith friendships.
Rita Khin Pride | Mandalay, Bago and Yangon Region
Portraits of transgenders.
Letyar Tun Seeking Transitional Justice | Myanmar Multiple Regions
A living memorial to political prisoners who perished in Myanmar’s jails.
မြန်မာအကျဉ်းထောင်များမှာသေဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများရဲ့ မိသားစုနဲ့ အမှတ်တရပုံရိပ်များ။